अनट्रेन्ड ब्युटीसियनहरू | samakalinsahitya.com
- सञ्जय बिष्ट
आकाशमा बादलको एउटै टुक्रा पनि थिएन। वारिकाले पारि र पारिकाले वारि टल्केका छानाहरू गनेर छोराहरू छोरादेखि माथि उठेर अझ कतिजना बाबुको घरदेखि छुट्टिएर घरका बाबु भएछन्—थाहा गर्दथे। केही दिनअघिदेखि दसैँको घाम लागेको थियो।
केही दिनअघिदेखि नै बाहिरिएकाहरू रौनक चेपेर घर आइपुग्दै थिए। परिवारमा, गाउँमा उनीहरूले शरद्को मौसमले जस्तै उज्यालो ल्याएका थिए यद्यपि यसपालि कति घर पुग्ने बाटो काटेर दसैँले कति घरहरूको सँघार टेकेको थियो। पोहोरसम्मका सबै दसैँहरूमा पुरानो रूप फेरेर सुन्दर बन्ने कतिवटा घरहरू इच्छाप्रतिकूल पुरानै रूपमा अप्ठ्यारो मानी कुक्रुक्क परेर बसेका थिए।
माथिको आज्ञामा तलकाहरूले लेखेर टॉंँसेका थुप्रै गल्तीहरू भएका, मनाउनुपर्ने वैकल्पिक चाड़ बताएर दसैँ मनाउनेहरूलाई हजार रुपियॉं जरिमाना कि सम्प्रदायबाट बहिष्कारको चेताउनी लेखिएको पोस्टर पो पढ़्दै थियो अर्जुनकुमार।
ठाउँ-ठावैँ अलकत्रा उप्किएर खाल्डाहरू परेको बाटोमा हल्लिँदै, त्यहॉं भएर आएका र भएर गएका प्राकृतिक हावा र गाड़ीहरूको गतिले सिर्जना गरेको कृत्रिम हावाले उड़ाएर बसाएको धुलो उड़ाउँदै अर्को मारुति गाड़ी आएर चौताराअघि रोकियो।
रोकिएको गाड़ीभित्रको मान्छे चिन्नखोज्यो अर्जुनकुमारले। स्वास्नीमान्छे रहेछ तर को चिनेन।
रोकिएको गाड़ीको दरबाजा खस्रो आवाजसित निर्दयतापूर्वक तानेर, एउटा हातले सानु ब्याग समातेर अर्को हातले हत्केला जत्रै मोबाइल पक्रेकी, प्यान्ट र टप्स लगाएकी, न लामो न छोटो केश नबाटेर एउटा बॉंधेकी स्त्री गाड़ीबाट झरी।
ओठमा मुस्कान पोतेर शिर पनि केही झुकाएर आउनेले ब्याग र मोबाइल जोड़ेर नमस्कार गरिसकेकी थिई।
‘‘अमृता!’’ हात जोड़्योे अर्जुनकुमारले।‘‘आइपुग्यौ?’’ थप्यो।
दराजभित्रको नयॉं जुत्ता आँखामै बोकेर पुरानो जुत्ता लगाएर र कतिजना त खालीखुट्टै केही बेरअघिसम्म चौतारावरिपरि उफ्री-पाफ्री गरिरहेका नानीहरू चौताराकै छेउमा सड़कको डिलपट्टि मारुतिपट्टि फर्किएर सरको अघिजस्तो चुपचाप उभिएका थिए।
चिनेर नजिक पुगिहाले तिनीहरू पनि।
उज्यालो थपियो उज्यालोमा।
—बड़ी जाती नै हुनुहुन्छ?
—महेश कुन क्लास पो पुग्यो?
—भोलि आउँछु, लक्ष्मीलाई भन्दिनुहोस् है-हरू सोधेर भनेर ऊ ओह्रालो लागी मसिना दुईवटा झोला मसिनै केटाहरूलाई झुन्ड्याउन लगाएर।
तिनीहरू गइसकेपछि अर्जुनकुमार केही बेर चौतारामै बसिरह्यो। कुनि किन उठेर हिँड़िहाल्ने जॉंगर उसको शरीरबाट अचानक हराएको थियो।
घामको तल्लो वृत्तले डॉंड़ालाई छोएको थियो। शरद्को त्यो सॉंझ सॉंच्चै सुन्दर थियो, त्यसलै लोभलाग्दो पनि थियो। सुन्दरता देख्नसक्ने दृष्टि र ग्रहण गर्नसक्ने मन-मस्तिष्कहरूलाई त्यो वातावरणले अमरत्व कसैलाई प्राप्त छैन भन्ने कुरोको स्मरण गराएपछि मुटुको गति पनि बढ़ाएर असामान्य स्थितिमा पुर्याउँथ्यो। जीवनको अन्तिम घड़ीमा अझै एउटा सत्कार्य गरिराखूँ भनेझैँ डुब्दो घामले पश्चिम-पूर्व दुवैतिरका क्षितिज अनि डॉंड़ा-पाखाहरूलाई धेर-थोर सिङ्गारेको थियो। कलाज्ञहरूलाई प्रकृतिको त्यो सिर्जना आश्चर्यजनक सुन्दर थियो।
त्यतिकै पक्रेर राखिराखूँजस्तो त्यही मनोहर सॉंझमा पचास-साठी फुट परसम्म झार गोड़ेको बाटो हिँड़ेर आँगन आइपुगी अमृता।
आँगनमा पिरामा बस्न आइपुगेकी सासू ध्यानपूर्वक टुङटुङेमा मसला कुटिरहेकी बुहारीलाई हेरिरहेकी थिइन्। मट्टितेल हालेको रङ्गको सानु बट्टामा ब्रस हल्लाउँदैथ्यो अर्जुनकुमार।
सम्पूर्ण शरीर नै थाकेको थाहा भयो उसलाई।
‘‘बड़ी नमस्ते,’’ मुखले मात्रै भनी किनभने एउटा हातले पोलेथिनको पोका र अर्को हातले मोबाइल पक्रेकी थिई अमृताले।
भाउजूलाई सन्चो सुबिस्ता सोधी। हातको पोका दिई। लक्ष्मीलाई खोजी।
‘‘भित्रै जानु नि बैनी,’’ भाउजूले भनी।
रमाएको चर्को स्वर आँगनकाहरूले सुने।
तिरासीको कुरा हो। बाबुको अन्त्येष्टि भर्खर सकिएको थियो। त्यस चिरञ्जीवी घटनाले अर्को त्यस घटनालाई घामले जूनलाई प्रकाश दिएजस्तो चिरता प्रदान गरेको छ।
बोलाउन आइपुगेछ तलबाट एकजना ठुलो सॉंझमा।
सेतो टोपी लगाएर अर्जुनकुमार घरबाट निस्कियो।
लगेर भर्ती गरेको घण्टा नबिती ‘‘जाती भयो,’’ बाहिरका अर्जुनहरूले सुने।
‘‘के भयो?’’ सामूहिक जिज्ञासा थियो।
‘‘मैले भनेको थिइनँ?’’ रमाएको थियो एकजना।
जे होस् यो अमृता जन्मिएको तिरासीमै हो, बाइस वर्षअघि।
आठमा पढ़्थी। फेल भई।
‘‘नपढ़ेर के गर्छस्?’’ हकारेर सोधी आमाले।
नङ टोकेर उभिरही अमृता।
‘‘अर्को स्कुल पढ़् न त,’’ पनि भनेकी थिई आमाचाहिँले।
स्कुल छाड़ी अमृताले।
स्कुल छाड़ेपछि अमृताले गाउँकै भिडियो हलमा नयॉं-पुराना हिन्दी सिनेमा खुब हेरी। सरस्वती पूजा, शिवरात्री पूजा र कृष्ण अष्टमी पूजाहरूमा भाइ-बहिनी र साथीहरूलाई निक्कै खेप प्रतिनिधित्व दिई। केही समयलाई बाल-विकासकी गुरुमा पनि भई। आई.सी.डी.एस.को खिचड़ी पकाउने कामको लागि पनि निक्कै कोसिस गरेकी थिई। होला-होलाजस्तो हल्ला फैलिहालेको थियो, काम तर पञ्चायत सदस्यकी भान्जीकै भयो।
खबर सुनेको सॉंझ ऊ भिडियो गईन।
महेश दुई सालको थियो त्यतिबेला। त्यति बेला भन्नाले त्यतिबेला, जति बेला खिचड़ी पकाउने काम नपाउनु अमृताले त्यतिन्जेलको आफ्नो सबभन्दा ठुलो हार मानेकी थिई, जीवनभरिलाई दुर्घटनै ठानेकी थिई।
‘‘अब एउटा छोरी त हुनुपर्छ नि,’’ मनको कुरा भनेको थियो अर्जुनकुमारले स्वास्नीलाई।
‘‘केको हतार?’’ मुसुक्क मुस्कुराएकी थिई महेशकी आमा।
‘‘हतार-सतार हैन, छिट्टो भयो भने छिट्टै हुर्किन्छ। लन्ठै खलास्।’’ भनेको थियो अर्जुनकुमारले।
कल्पनातीत त्यो मुलुकमा को गई होला गाउँबाट सबभन्दा पहिला—अर्जुनकुमारहरूलाई थाहा छैन तर जानेहरूको सङ्ख्या पॉंच गनाएपछि स्वास्नीले, अर्जुनकुमार छक्कै पर्यो।
‘‘कपाल बनाउनु?’’सॉंच्चै उद्देक लागेको थियो उसलाई।
‘‘अन्त के त!’’स्वास्नीले भनी।
त्यो रात ननिदाइन्जेल अर्जुनकुमारको मस्तिष्कमा थाहै नपाई गाउँबाट त्यसरी जानेहरूको अनुहार आइरह्यो।
बिच-बिचमा लोग्ने स्वास्नीबिच लोग्नेको छोरीको रहर सन्दर्भमा तीन-चारपल्ट कुराकानी भयो।
‘‘दिल्लगी गरेको जस्तो लाग्यो कि क्या हो?’’ स्वास्नीसित रिसायो पनि अर्जुनकुमार एक दिन।
‘‘हन के सारो हतार लागेको यो मान्छेलाई।’’ छक्क मानेकी अनुहारकी स्वास्नीले लोग्नेलाई हेरी।
‘‘हतार नगर तिमी, चालिस नाघेर पाऊ नानी। हेर्नुपर्दैन आफ्नो उमेर पनि?’’ हात पनि हल्लाई-हल्लाई भन्यो उसले स्वास्नीलाई।
‘‘समयमै हुर्किहाल्यो भने...’’ पनि थप्यो लोग्नेले ।
तर थपेकोमाको ‘हुर्किहाल्यो’-ले निक्कै बेर घोरायो उसलाई।
‘‘के ग्यारेन्टी छ छोरी हुन्छ भन्ने ? छोरै भयो भने फेरि....’’ भन्दै थिई छोराकी आमाले। उसको ध्यान त्यतातिरबाट हटिसकेको थियो। कुरो ठिकसित नबुझेपछि प्रतिक्रिया जनाउने कुनै थिएन।
6 -सात महिनामा बामे सरेर, भित्ता समाई उठेपछि एक पाइला, दुई पाइला, लड़ेर उठेर धर्खरिँदै चार -पॉंच पाइला र पटाई बजाएर वल्लो कोठा र पल्लो कोठा कुदिँहिँड़्ने, तोतेदेखि बिस्तारै बढ़्दै तर एकदम स्पष्ट भइनहालेको बोलीको, चार वर्षजत्तिकी अथवा 6-सात महिनादेखि चार वर्षजत्तिसम्म मात्रै बढ़ेकी, त्यतिसम्म मात्रै बढ़ेकी छोरीको यस्तो असामान्य लोभ कहॉंबाट आयो अर्जुनकुमारमा? लोभ छोरीको कि त्यो उमेरभित्रकी छोरीको बालसुलभ क्रियाकलापको ? उसको कल्पनामा छोरी किन बढ़्दैन हिजोआज तीन-चार वर्षभन्दा उँभो?—पहिलोचोटि धोरियो ऊ।
गएका पॉंचले एक-एक गरी छुट्टी आउँदा थप पॉंचलाई जीवनको परिभाषा बुझाई सपनाबाहिरको संसारमा पुर्याइसकेका थिए। पुर्याइसकेका थिए के जानेहरूमध्ये डॉंड़ाघरे काइँलाकी छोरी—जो गाउँका सबैसित हॉंस्ने-बोल्ने सबभन्दा फर्साइली थिई, कुन शहरमा हो ओठको मुस्कान हराई गएकी दुवै महिनामा अर्कै भएर गाउँ फर्किसकेकी थिई।
‘‘भाग्य पनि हुनुपर्छ, जॉंगर पनि। घॉंसै काट्नु लेखेको छ निघारमा अन्त किन बसोस् कपाल काट्नु?’’ बुहारीछेउ बसेकी सासूको प्रतिक्रिया पनि सुनेको थियो अर्जुनकुमारले।
तर गाउँका अरू काइँलाकै छोरीजस्ती परदेश खटिखान नसक्ने कहॉं थिए र? गएकाहरू बेला-बेला एकदम मान्छेजस्तो भएर आई फर्किजॉंदा एक-एकजना चेपेरै जॉंदैथिए।
पोहोर बर्खामा पर सूर्यमानकी छोरी एउटा सानु झोला बोकेर गएकी वर्ष दिनपछि ठुलो धर्के ब्याग र ठुलै सुटकेस पनि बोकाएर आई।
आएकी पर्सिपल्ट ब्याग झुन्ड्याएर बजार गई। बेलुकी सामसुङ कम्पनीको चौध इन्चे रङ्गिन टिभी,दुई बन्डल च्यादर, घरका सबैलाई के-के, के-के र अनुहारभरि गर्वमिश्रित हर्क लिएर फर्की।
‘‘हेर त परै!’’ थुप्रै आमा-बाबुहरूले भने।
महिना दिनजति बसी होली ऊ। एक दिन घरमा आएकी थिई। कोठाभित्र पसेर लामो बसी लक्ष्मीसित।
फर्किँदा अरूझैँ ऊ पनि एक्ली फर्किन। बाबु-आमा दुवैलाई ढोगी लट्टिएकी जस्ती, तन्द्रामा जस्ती अमृता पनि घरबाट निस्की।
प्रशिक्षणहीन, अल्प-शिक्षित गाउँकी अमृता पनि त्यसरी केश बनाउने काम गर्न हिँड़ेकी सुन्नासाथ अर्जुनकुमारको मस्तिष्कमा र आँखैमा पनि छोरी जन्मिएकी थिई। जन्मेर बामे सर्न थाली। उभिई। उसको मुटुको गति नै बढ़ाएर, घुँड़ामा कुत्कुती लगाएर आँगनको डिलतिर पनि कुद्न थाली। छोरी बढ्दै गई, बढ़्दै गई। बढ़ेर बाह्र-तेह्र वर्ष पुगेकी छोरीलाई अझ बढ़्न नदिन भयातुर अर्जुनकुमारले कल्पनाको कष्टप्रद प्रदेसबाट अत्तालिँदै यथार्थमा फाल हान्यो अनि लामो नि:स्वासपछि ‘‘हट्’’भन्यो।
पहिला-पहिलाभन्दा केही थोर उत्साहित धेरैले दसैँ मनाए। थोरैले माथिको आज्ञा मानेर केटाकेटीको मन दुखाए।
दसैँको रौनक सकियो।
कागहरू नआए पनि घर परतिर टपरीमा खानेकुरा राखिदिए सबैले।
कुकुरहरूले माला लाए।
भैलो खेलेर अमृताकै घरमा सुती देउसीको बिहानै रातो आँखाकी लक्ष्मी घर आई।
उसकै दँवलेहरूसित महेशले पनि 6-सात घर देउसी खेल्यो।
दसैँ मनाउने, नमनाउने सबैले तिहार मनाए।
भाइटीकाको भोलिपल्ट बेलुकी अर्जुनकुमार तीनधारे दिदीकोबाट टीका लगाएर आइपुग्यो।
लक्ष्मी कोठामा थिई। तिनीहरू अङ्गेटीको वरिपरि थिए। ‘‘कान्छी जान्छु भन्दैछ, अमृतासित,’’ छोरातिर हेरेर भनी आमाले।
स्वास्नीले पनि लोग्नेको अनुहारमा हेरी।
‘‘कता?’’ सोध्यो अर्जुनकुमारले।
‘‘भूपाल’’ बताएर ‘‘कपाल बनाउनु’’ कारण पनि बताई आमाले।
‘‘पर्दैन, ट्याक्कै पर्दैन,’’ आँखा र स्वर दुवै ठुलो बनाएर करायो अर्जुनकुमार।
‘‘जावोस् न त,’’ सामान्यभन्दा सानो र अनुरोधको लयमा स्वास्नी बोली।
‘‘उमेर-उमेर गइसक्यो। यसरी कति दिन बस्छ? म त डॉंड़ाकै घाम भइहालेँ। मपछि के हो-के हो। त्यसले काम गरेर आफ्नै जिउ मात्रै पाले पनि भइहाल्यो। गैराको छ सब। त्यसलाई नजा किन भन्नु।’’
छोराले आमातिर हेर्यो मात्रै।
ओछ्यान पसेपछि लोग्ने-स्वास्नी निक्कै बेरसम्म खासखास-खुसखुस गरिरहे।
‘‘तिमीले आफ्नो आँखाले देखेको छौ?’’ स्वास्नी रिसाई।
‘‘देख्नुपर्छ? देख्नुपर्छ? घॉंस काट्नु र केस काट्नु एउटै हो? जसले जे भन्यो पत्याएर हुन्छ? यो चलाउनु पर्दैन?’’ उसको औँला उसकै कन्पटीमा थियो।
स्वास्नी निदाएपछि पनि अर्जुनकुमारको मनमा के-के, के-के आइरह्यो।
अर्को दिन पनि तिनीहरूमाझ त्यस विषयमा कुराकानी भयो।
अर्जुनकुमार प्रतिक्रियामा थोर बोल्ने धेर मौन रहने भइसकेको थियो। उसको मौनतालाई अरूले स्वीकृति ठानिसकेका थिए।
दुई दिनपछि लक्ष्मी कोठामा झोलामा लुगाहरू मिलाएर हाल्दै थिई। दाजु-भाउजू दुवै पसे कोठामा।
भाउजूले आफ्नो दाहिने मुठ्ठी नन्दतिर बढ़ाएर भनी,	‘‘एकै ठाउँमा नराख्नू, चाहिने मात्रै पर्समा हाल्नू।’’
‘‘नजानू भनेको मान्दैनौ,’’ अर्जुनकुमारले भन्यो।
अरू पनि केही भन्छन् कि भनेर नन्द-भाउजू दुवैले केही क्षण पर्खे।
केही क्षण उभेर अर्जुनकुमार कोठाबाट निस्कियो।
‘‘एन.जे.पी.सम्म पुर्याउन जा,’’ छोरालाई आज बिहान पनि भनी आमाले।
‘‘छ्या पर्दैन हौ,’’अमृता मानिन।
‘‘होस्, होस्’’ जीवनमा दुईचोटि सिलगढ़ीसम्म पुगेकी लक्ष्मीले पनि थपी अनि नियास्रो अनुहारकी आमालाई ढोग्न निहुरी।
दुवै हत्केला अघिल्तिर ठाढ़ो फैलाएर ‘‘घरदेखि निस्किँदा नढोग्नू’’ आमाले छोरीलाई रोकी।
लक्ष्मीले दाजु-भाउजूलाई हेरी।
धारावाहिक सकेर दस बजीतिर स्वास्नी कोठामा आई। अर्जुनकुमार सुतेको थियो, निदाएको थिएन।
‘‘बत्ती मारिदिऊँ?’’ सोधी।
लोग्नेले ‘‘होस् न एक छिन,’’ भन्यो।
कुनापट्टि पसी स्वास्नी खुट्टापट्टिबाट।
‘‘पर्सि त तल भाउजूहरू पनि जाने अरे अस्पताल,’’ न भनाइको, न सोधाइको शैलीमा कुरा पनि असान्दर्भिक गर्यो अर्जुनकुमारले।
‘‘के रे?’’ स्वास्नीले सोधी।
लोग्नेले कुरो स्पष्ट गर्यो।
‘‘कसले भन्यो तिमीलाई?’’ स्वास्नी केही चल्मलाई।
‘‘सुनेको,’’ स्वास्नीपट्टि फर्कियो ऊ।
‘‘विकासको बुड़ी, पर कान्छा मामाको बुहारी...’’ सन्तानको रहर पुगिसकेका गाउँका थप स्वास्नीमान्छेहरू जो पर्सि एकसाथ अस्पताल जॉंदै थिए, सूची प्रस्तुत गरी लोग्नेसमक्ष स्वास्नीले।
‘‘कि जाने तिमी पनि?’’ अचानक खुस्कियो अर्जुनकुमारको मुखबाट।
‘‘हँ?’’ स्वास्नीले आँखा फारी।
‘‘जान्छौ भने जाऊँ,’’ भन्यो स्वास्नीलाई।।
‘‘अनि छोरीचैँ?’’ स्वास्नीले भनी।
अर्जुनकुमारले केही भनेन।
स्वास्नीले ‘‘हिजोअस्तिसम्म त छोरी-छोरी भन्थ्यौ त,’’ पनि भनी।
‘‘मान्छेको सबै इच्छा पुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि के छ र?’’ भनेर अर्जुनकुमारले बत्ती निभायो।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : वुधबार, 21 फागुन, 2070
कृष्णप्रसाद नेपाली उर्फ प्रमिथस
यसरी हुनसक्यो रामप्रसाद ‘लोग्ने’
भाउजू विधवा भइन् (?)
माइजूलाई म मान्यो भन्दिनू
थुक्क! तैँले पनि घर बनाइहाल्नु परोस्
मेरी स्वास्नी र त्यो मान्छे
दोस्रो संस्करणको तयारीमा